Qiimaynta wardoonka EPRDF ee ONLF?! Q-2aad. | ogaden24
Qiimaynta wardoonka EPRDF ee ONLF?! Q-2aad.
Ururka ONLF wuxuu muddo 22 sano ah (1994-2016) dagaal hubaysan kula jiray nidaamka ay Tigreegu hoggaaminayaan ee Ethiopia ka talinayey rubuc-qarnigii lasoo dhaafay.
Ururka waxaa loo aas-aasay welina u dagaalamayaa hal ujeeddo oo ah in dadka soomaalida ah ee nidaamka Ethiopia ku hoos nooli helaan xuquuqdooda asaasiga ah oo ay ugu horrayso xaqqa aayo-katashiga, laakiin xaqiijinta hadafkaasi weli Ururku ma xaqiijinin sababtoo ah maba sahlana sugiddiisu.
Intii uu Ururku dagaalka hubaysan kujiray wuxuu soo maray marxalado kala jaad ah oo togan iyo tabanba leh, maantana Ururku wuxuu ku jiraa mid kamida marxaladahaas kor-ukaca iyo hoos-udhaca isugu dhafan ee ay xeerarka noloshuba ku dhisanyihiin.
Dadka xaaladda gobalka darsaayi waxayna isku waafaqsanayn, xaaladda dhabta ah ee uu ururku kujiro, markii laga reebo wixii waaqica ka muuqda ee aan faallo u baahnayn, macnaha way adagtahay in si sax ah loo ogaado xaaladda dhabta ah ee Ururka.
Dhimaca kale siyaasiyiinta Ethiopia, Saraakiishooda ciidanka Military-ga, Maamulka kilalka iyo hay’adda wardoonka intaasiba iskuma waafaqsana xaaladda dhabta ah ee Ururka iyo saadaasha mustaqbalkiisa.
Haddaba waxaynu soo qaadanaynaa fikradda hay’adda wardoonka U qaabilsan Ethiopia (Ethiopian national intelligence and security service) ee magaceeda loosoo gaabiyo NISS, innagoo dabcan ka duulayna xogo aynu ka helay saraakiil heer dhexe ah oo katirsan hay’addaas.
Hay’addu waxay ku qiimaysay xaaladda ururka sidan hoosa:
ugu horrayn Waxay leeyihiin Ururku wuxuu ka kooban yahay afar (4) hay’adood oo muhiim ah:-
1-Gudiga fulinta ee Ururka oo ah hay’adda maamul iyo hoggamineed ee ugu saraysa.
2-Ciidanka Jabhadda (CJWXO) oo ah hay’adda labaad ee ugu muhiimsan guud ahaan halganka Ururka, ahna hormuudka halganka gudaha.
3- Golaha dhexe ee Ururka oo ah hay’adda xeer dajinta, islamarkaana meeqaam iyo awoodo badan leh sharci/xeer ahaan.
4- iyo Jaaliyadaha dibadda oo leh door aad iyo aad muhiim ugu ah halganka, gaar ahaan dhica dhaqaala iyo matalaadda bulsho ee qadiyadda gobalka daafaha caalamka.
Afartaas (4) waaxood ee ay uqaybiyeen Ururka, ayay qiimayntooda ku dhiseen oo waxay leeyihiin: Hay’adda koowaadi (G/fulinta) waxay u shaqaynaysaa sideedii macnaha waa hay’add dhisan isku xidhan fulisa hawl maalmeedkeeda oo aan wax khilaaf ahi dhex oollin.
Hay’adda labaad (Ciidanka Jabhadda) hoosbaa loo dhigay awoodeedii, waxaana la galiyey xidhiidhi dhinacyo badan leh, sidaa awgeed waxay kujiraan marxalad is difaac iyo dibu kabasho ah, sidaas oy tahay weli waxay leeyihiin talis guud (Xarun-dhexe) saraakiil ciidan iyo ciidan midaysan oo ku qanacsan inay udhintaan xaqiinjinta hadafka ay rumaysanyihiin.
Hay’adda saddexaad (Golaha dhexe) uma hawlgasho sidii loogu talo galay ama looga baahnaa.
Hay’adda afraad (Jaaliyadaha dibadda) aadbay u abaabulan yihiin, wax saamayn ah oo muuqatana kumayna yeelanin dadaaladii ay Dawladda dhexe iyo tan deegaanku kasameeyeen dalalka dibadda, inkasta oo ay meelaha qaarkood ka jiraan tabashooyin u baahan in laga faa’iidaysto.
Dhinaca kale waxay hay’addu (NISS) si gooni ah u qiimaysay shacabka gudaha iyo dareenkiisa ku aaddan nidaamka Dawliga ah ee ay EPRDF hoggaaminayso iyo dhinaca kale sida uu shacabku u arko Ururka iyo mabdi’iisa.
Hay’addu (NISS) waxay aaminsan tahay in dadka deegaanku Dowladda u muujiyeen taageero ka ballaadhan tii ay dhawr iyo toban sano ka hor u hayeen, hase ahaatee waxay hay’addu (NISS) leedahay taageeradaasi 85% waa mid ku jirta gacanta dowladda e ma’aha mid ku jirta laabta/qalbiga dadwaynaha (waa taageero qasab ku timide aan ku imanin laab-furnaan iyo qanaaco).
Xigasho By:Ismaaciil Cali Ismaaciil